Wholesale A4 handbag Mugadziri uye Mutengesi | Sheerfond
Nemabasa akabatikana ebhizinesi uye nekugadzirwa kwezvinhu zvemagetsi, tinofanirwa kuunza zvinhu zvakawanda kana tichienda kunotora chikamu mumisangano uye zvimwe zviitiko, zvakaita semalaptop, makomputa, nharembozha, makadhi, mabhangi emagetsi, kuchaja tambo, nezvimwe. ., zvinhu zvakawanda zvakaunganidzwa muhomwe, izvo zvakashata kwazvo Hongu, isu takagadzira chigadzirwa chinogona kuronga zvigadzirwa zvako zvakanaka uye kukuunzira ruzivo rwakanaka Bhegi rekuchengetera bhizinesi, riunze mumabasa ako ebhizinesi, rinogona. ..
Nemabasa akabatikana ebhizinesi uye nekugadzirwa kwezvinhu zvemagetsi, tinofanirwa kuunza zvinhu zvakawanda kana tichienda kunotora chikamu mumisangano uye zvimwe zviitiko, zvakaita semalaptop, makomputa, nharembozha, makadhi, mabhangi emagetsi, kuchaja tambo, nezvimwe. ., zvinhu zvakawanda zvakaunganidzwa muhomwe, izvo zvakashata kwazvo Hongu, isu takagadzira chigadzirwa chinogona kuronga zvigadzirwa zvako zvakanaka uye kukuunzira chiitiko chakanaka
Bhegi rekuchengetera bhizinesi, riunze mune rako bhizinesi zviitiko, rinogona kusangana nezvakawanda zvaunoda, rine akawanda mabasa, ikozvino rega ndinyorore izvo:
1. Iri bhegi rakakwirira kwazvo-kumagumo, rakasarudzika, uye rakagadzirwa chaizvo, kunyanya rakakodzera misangano yebhizinesi.
2 Iyo inharaunda ine hushamwari PU yeganda chigadzirwa, zvese zvinhu zvinoenderana neROHS zviyero.
3. Iyo inouya ne mobile mobile bank, 10000mAh, kuve nechokwadi chekuti foni yako inogona kubhadhariswa kana iwe uri panze Uye chiteshi chayo chekuchaja chakavanzwa, iyi zvakare yedu patent dhizaini. Izvo hazvikanganisa kutaridzika kwechigadzirwa zvachose. Kana isu tikasakuudza iko iko kwechaji yekuchaja iri mubhuku, unogona kusazviwana.
4.Ichaja isina waya, chero bedzi nharembozha yako iine isina waya yekuchaja basa, unogona kushandisa isina waya kuchaja.
5. Ine bhegi renharembozha, nharembozha inogona kuiswa mune zviri nyore kwazvo.
6. Inogona kubata 13-inch computer,
7. Inogona kuisa pepa reA4 gwaro. Iyo inouya neA4 notepad
8. Ine nharembozha inobata, nharembozha inogona kuiswa pairi kuona mafirimu.
9. Ine homwe yemakadhi, inogona kubata makadhi akawanda.
10. Ine chinyoreso.
11. Inogona kuve yakaremara, uye bhegi uye notepad inogona kuchinjwa paunoda.
Ini ndatozivisa akawanda mabasa, saka ndiri kutaura nezvekushandisa kwayo kukuru:
1. Zviri nyore kushandisa kumisangano yebhizinesi, uye inosanganisa akawanda mabasa kuti zviite nyore kwauri.
2. Sechipo chebhizinesi, chiri chepamusoro-pekupedzisira chipo chebhizinesi.
3. Zvipo zvepamusoro zveshamwari.
Muenzaniso Nha. A4-2
chinzvimbo 4000mAh / 5000mAh / 8000mAh / 10000mAh / 20000mAh
Saizi yelaptop 13-inch
Saizi repepa A4
Kutengesa pasina waya Gr5W
Maitiro Ekushandisa Pr Nyowani Bhizinesi Kupa, Zvipo zvekuzvarwa, zuva rababa, zuva raamai, zvipo zvekutenda
Ruvara Dema, Grey, tsika
saizi yechigadzirwa 325mm * 260 * 32mm
chigadzirwa uremu 960g
kurongedza saizi 335mm * 270 * 40mm
katuni bhokisi saizi 42cm * 35cm * 29cm
Nhamba pabhokisi 10pcs
Kurema kwebhokisi 13.5kg
Pashure: Kupisa Kutengesa - A5 isina waya yekuchaja nharembozha simba notepad - Gaoyuan
Zvadaro: Magnetic mbeva padhi-grey
Pr Nyowani Bhizinesi Kupa
3in1 isina waya kuchaja mbeva pad
Wireless kuchaja nharembozha simba chikwama
Graphene kudziyisa ziso mask